Xiaomi Gateway 3 - Xiaomi Smart HomeKit - dib u eegistii Hubki ugu dambeeyay - SmartMe
Xiaomi Gateway 3 - dib u eegis ku saabsan Hubkii ugu cusbaa ee ka yimid Xiaomi
23 Janaayo 2020
aqara hub, miino 3, xiaomi, albaabka xiaomi 3
Muddo dheer ayaan sugayay isaga. Ugu horreyn illaa ay ka bixiyaan, goor dambe goorta la iibsan karo iyo ugu dambeyntii sida ay albaab iigu imaaneyso. Waxaan u baahday inaan ogaado haddii uu xallin lahaa dhibaatooyinka oo dhan! Muxuu noqon doonaa Xiaomi Gateway 3. Tan ka baro dib u eegista hoose ee aan ku soo bandhigno qalliinka, howlaha iyo qiimeynta aaladdaan guri caqli badan.
Waxyaabaha laga rajeynayay Qalabka Guryaha ee Xiaomi 3 ee ugu dambeeyay waxay ahaayeen kuwo aad u sareeya. Waxay aragti weyn ka heshay agabyada xayeysiinta. Suurtagalnimada in lagu xiro 64 aaladaha, Bluetooth, Zigbee, Wi-Fi, Mesh. Albaabku wuxuu adeegsadaa dhammaan borotokoollada wada-xiriirka, uma baahnin inaan si toos ah ugu xirno godka (sidaa darteed kama xirna darbiga). Kaliya sheeko cirfiid.
Muuqaalka koowaad ee leh Xiaomi Gateway 3
Baakadaha iyo fulinta irridda lafteeda ayaa ah tayada ugu sarreysa. Sanduuqa si fiican ayaa loo moodayaa, xoogaa qaab Apple ah. Koodhka 'HomeKit' ayaa la dhigayaa meesha saxda ah, iyo fiilooyinkasta oo agabyada xiayaatar ah ee Xiaomi waa la aasay. Waa wax laga naxo! Albaabka laftiisu sidoo kale waa mid aad u quruxsan oo gebi ahaanba waxoogaa yar ah. Xarig yar, oo cad oo leh hal nal hore. Ku dar xadhigga microboolka micro-ga (maxaa USB-C aan ahayn?!) Iyo fur. Wax walba waxay u muuqdaan wax weyn.
Albaabkan way fududdahay maxaa yeelay maaha inaad toos toos ugu gashid godka. Waxaad kuxiran kartaa xarig waxaadna geli kartaa albaabka lafteeda shelf, tusaale ahaan. Waxay u egtahay mid aad uga qurux badan Aqara Hub. Waxaan si fudud ugu dhigi karnaa meel ku dhow Apple TV ama sanduuqa set-top waxayna u muuqan doontaa mid qurux badan sida xarun kormeer oo loogu talagalay guri caqli badan.
Isku dayga koowaad
Baaragaraafkan weligiis ma jirin maxaa yeelay marna looma baahnayn. Si kastaba ha noqotee, Xiaomi Gateway 3 ayaa nagu qasabtay. Sababtuna waxay tahay xiriirkii ugu horreeyay wuxuu ku dhammaaday fashil buuxa. Xaruntu waxay ku shaqeysaa mabda'a ah inaan ku darsanno aalada "ilmaha", sida dareemayaasha. Marka haddii hadaf aad hada kahor laheyd, sida Aqara Hub, markaa waa inaad meesha ka saarto oo aad kudartaa hadafkaaga. Dhawaq fudud fudud? Nasiib darrose, ficil ahaan, Xiaomi Gateway si fudud ugama baxdo.
Dhibaatada ugu horeysa ka dib markaad ku darto albaabka dalabka, haddii aad ku haysato afka Polishka, waa inaad ogaato waxa ku saabsan. Waxay leedahay shaqooyin badan dhammaantoodna waxay ku qoran yihiin Shiineys. Shaambadaha ayaa si toos ah u qariya shaashadda, waadna qiyaasaysaa waxa socda. Muddo ka dib, si kastaba ha noqotee, waxaad heleysaa ikhtiyaarka ah inaad ku darto qalab oo aad labalaabiso. Halkaas ayay dhibaatadu ka bilaabmaysaa. Waqtiga ugu horeeya, waxay igu qaadatay 2 saacadood in lagu daro dareemaha albaabka iyo daaqada caadiga ah! Dareemuhu wuxuu had iyo jeer ka goosanayaa albaabka, oo qiyaastii mitir u jira ...
Muddo ka dib, si kastaba ha noqotee, dareeraha ayaa lagu daray waxaana lagu dari karaa mid ka mid ah afarta qaab. Ma aanan ogeyn waxa ay ula jeedaan (shaambadaha Shiinaha), markaa waxaan ku xirey tii ugu horreysay. Way shaqeysay, in kasta oo aanan garanayn waxa. Waxaan bilaabay inaan ku daro dareemayaal biyo badan. Marka hore kan hore, ka dibna kan labaad. Waqtigan xaadirka ah, kii ugu horreeyay ayaa la waayey. Marka waxaan ku daray kii hore iyo kii saddexaad markale. Kii labaad iyo daaqadii daaqada waa la waayey ... in yar ka dib, waxba iima tarin, codsiguna wuxuu muujiyey qalad ... Waxay ahayd tilmaan muujineysa inay tahay waqtigii la seexan lahaa oo fursad la siin lahaa maalinta ku xigta. Gurigeyga caqliga badan waa in aan sugo in muddo ah - taageerada dalabka ayaa noqotay mid ka baxsan awooddeyda.
Habka labaad loogu talagalay Xiaomi Smart Home Kit
Maalintii labaad, waxaan ku dhowaaday Xiaomi Gateway 3 aniga oo leh tamar cusub oo leh himilo cad. Markan waxaan ku dari karaa dhammaan dareemayaasha! Si kastaba ha noqotee, wax baa i taabtay waxaanan go'aansaday inaan isku dayo inaan luuqadda ku beddelo Ingiriis. Natiijo ahaan, waxaan gartay sharraxaadda shaqooyinka shaqsiyeed ee aan kuugu sharixi karo sadarka soo socda. Dhammaan dareemayaasha ayaa ku daray iyada oo aan wax dhibaato ah wax walbana waxay bilaabeen inay xasuuqaan. Ma aqaan sida isbeddelka afku u shaqeeyay, laakiin way shaqaysay. Markaa waxaan ku dari karaa qalabka dareeraha heerkulka, dhaqdhaqaaqa ama furitaanka albaabka.
codsiga Qalabka Xiaomi Smart Home
Ka dib marka aad u bedesho luqadda dalabka Ingiriisiga, tarjumaadaha ikhtiyaarada shaqsiyadeed ayaa muuqda, oo inbadan ayaa jira. Bilowga waxaa jira afar qaab qeylo-dhaan:
Aasaasiga ah - dalabku wuxuu u shaqeeyaa si aan joogsi lahayn iyo dareemayaal ku xirma taas oo ogaata khatarta aan kala go 'lahayn. Iyadoo qayb ka ah dareemayaasha caqliga leh ee laga keenay Xiaomi, tusaale ahaan, dareemayaasha daadadka biyaha ama qalabka sheega qaaca ayaa la heli karaa.
Guriga dhexdiisa - dareemayaal kiciya alaarmiga markaan guriga joogno. Tusaale qol xiran? Dhibaato yar ayaan kala kulmay fahamka qaabkan.
Ka fog (guriga ka fog) - dareemayaal kiciya qaylo-dhaan markaad guriga ka maqantahay. Kuwani waxay noqon karaan dareemayaal loogu talagalay furitaanka albaabada iyo dariishadaha (wiishka cawsduur) ama dareemayaasha dhaqdhaqaaqa.
Hurdo (markaad huruddo) - dareemayaal kiciya qaylo-dhaan markaan hurudno. Waxay sidoo kale noqon karaan dareemayaal furitaanka albaabada iyo daaqadaha (wiishka cawsduur) ama dareemayaasha dhaqdhaqaaqa.
Qaybtu aad ayey u dhib badan tahay tanina waa dhibaato la xiriirta dalabka loo adeegsado aaladda. Waxaan u baahanahay inaan ku darno dareemayaal ku habboon qaab kasta oo qeylo-dhaan ah, intaas waxaa sii dheer waxaan xakameyn karnaa mugga iyo kicinta mid kasta oo ka mid ah. Aqara Hub waxay u shaqaysay si otomaatig ah, umay ahayn inaan wax kicin. Aniga ahaan waa qaab ka badan qaab ka badan waxa ku jira.
Waxaa jira laba ikhtiyaar oo kale oo ka hooseeya alaarmiga. Guda, aruurinta ficilada la kiciyey, iyo ku darida aaladaha "carruurta".
Qayb ka mid ah dejinta albaabka ayaan awoodnaa, iyo kuwo kale u dejiso ikhtiyaariyada qaababka hawlgalka shaqsiyeed iyo isku-darka xoog leh ee HomeKit. Marka laga reebo labadan ikhtiyaar, ma jiraan wax ka sareeya saldhigga xulashooyinka Xiaomi.
Xulashada ugu dambeysa waa iridaha laga helo qalabka korantada. Waxaan ku xiriirin karnaa aaladaha Bluetooth-ka albaabka oo aan ka xakameyno meel fog. Tani waa dheeri aad u weyn oo lagu daray.
HomeKit iyo Xiaomi Gateway 3
Albaabka jiilka saddexaad ayaa leh taageerada HomeKit, sida kii hore. Waxa laga yaabo inay kugu yaabiyaan marka hore waa maqnaashaha aaladaha ka muuqda qorshaha gurigeenna. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya Xiaomi Gateway 3 iyo Aqara Hub: midka koowaad waa albaab, midka labaadna waa qaylo-dhaanta leh shaqada albaabka. HomeKit waxay u aragtaa Aqara Hub inay tahay mid qaylo dhaan ah sidaas darteedna sidan ayaan ugu difaaci karnaa. Xiaomi Gateway 3 waxaa loogu talagalay HomeKit oo ah irrid aan la arki karin. Si aan u helno, waxaan u baahan nahay inaan galno nidaamka gurigeenna oo aan halkaas ka helno.
Qalabka isku xidhka HomeKit way fududahay. Dhibaatada kaliya ayaa ah la'aanta dareemayaasha daadadka. In kasta oo aan iyaga ku daray marar badan, kama muuqdaan HomeKit. Dhammaan dareemayaasha kale waa la arki karaa. Waxa i dhibaya ee badan waa kartida aan u leeyahay inaan shidno alaarmiga. Waa inaan galo Mi Home markasta.
Waxaa mahad iska leh Maciej, waxaan horeyba uheysanay dariiqa wadashaqeynta ee Caawinta Hoyga! Si kastaba ha noqotee, waxay u shaqeysaa oo keliya aaladda iOS, sababtoo ah waa inaan adeegsanaa HomeKit.
Kaliya gal koodhka HomeKit, oo aad ka heli doontid xagga hoose ee irridda iyo sanduuqa. Dhammaan dareemayaasha horey loogu soo daray HomeKit sidoo kale waxay ka muuqan doonaan HA. Kani wuxuu khuseeyaa oo keliya qalabka "carruurta". Qalabka lagu daro irridda 'BLE gateway' uma muuqan doono habkan.
Xiaomi Gateway 3 maalin walba
Sidee bay iriddu u shaqeysaa dhowr maalmood ka dib hawlgalka? Waxay leedahay faa'iidooyinkeeda iyo qasaarooyinka Waxaan ku hayaa aragti ah in marka ay timaado xasilloonida xiriirka, ay ka fiicantahay Aqara. Waxaa igu dhacay Aqar in qalab qaar ka mid ah uu ka dhacay isgaarsiintii. Iyada oo la adeegsanayo Xiaomi Gateway 3 tani ma jirto. Nasiib darrose, kani waa kan kaliya ee weyn ee aan ku arko kiiskan hadafka.
Aad ayaan uga xumahay kartida aan ku bilaabi karo qaylo dhaanta dalabka Apple Dom. Muddo bilo ah ayaan ku baranayay, haddana waa ay dhammaatay. Natiijo ahaan, waa inaan galo arjiga Mi Home oo aan ka wareejiya heerkaas. Ma jecli xaqiiqda ah in MyKit uusan lahayn wax dareemayaal daadad biyo ah. Tani waa xaalad aan caadi aheyn.
Hadafka ugu dambeeya ee hadafku waa arin qaylo dhaan ah. Albaabka wuxuu umuuqdaa inuu yahay howshiisa, laakiin guusha la'aan hadalka. Taasi waa sababta aan u diyaarinay mid gaar ah tutorial sida loola macaamilo.
Mi Hub V3 - sida loogu hubeeyo Aqara Hub
Mi Hub V3 waa irridda ugu dambeysay ee laga soo bilaabo Xiaomi. Waxay leedahay howlo badan oo cusub marka loo eego kuwii ka horreeyay ama albaabka Aqara. Kuwaas waxaa ka mid ah Albaabka BLE ama alaabo badan oo la taageeray (64 oo la xidhiidha ...
Waan ka xumahay, laakiin waxaan ku soo noqonayaa Aqara Hub. Albaabka Xiaomi waa mid qabow, laakiin waxay leedahay waxyaabo dhawr ah oo i dhiba. Xiriirka arjiga ayaa dib loo soosaaray, oo waxaan u xiisay astaamaha muhiimka ah ee Apple House. Waxaa laga yaabaa in nooca xiga Xiaomi uu ku soo noqon doono qaar ka mid ah qaabab la xaqiijiyay, isla waqtigaasna waxaan sugeynaa xarunta hubinta ee Aqara M2.
Haddii aad rabto inaad iibsato Xiaomi Gateway 3, waad ku samayn kartaa adigoo gujinaya kan link.
Aaladaha Xiaomi ee suuqa Polish ee 2020
Markaad dib-u-eegeyso Xiaomi Gateway 3 oo aad ka wada-hadleyso Qalabka Guriga, waxaa habboon in laga wada hadlo mowduuca guriga caqliga leh si ballaaran. Qalab noocee ah oo Shiineeys ah ayaa hadda laga heli karaa suuqa Boolishka? Qalabkee u qalma tixgelin iyo amar? Kuwani waa su’aalaha aan ka wada tashan doonno sii wadidda maqaalkan.
Illaa dhowaan, aaladaha Xiaomi waxay aadeen suuqa Polish oo keliya iyagoo isticmaalaya AliExpress ama iibiyayaal tiro yar oo alaabada dibada ka keenaya. Sanadka 2020, tani waa wax la soo dhaafay - suurtagalnimada macaamiisha ayaa si weyn u ballaarisay, kuwa kale sababta oo ah furitaanka dukaanka rasmiga ah ee internetka iyo qolalka showga. Telefoonnada Xiaomi waa la is qori karaa, oo halkan - sumadda lafteeda ayaa heshay sumcad aad u weyn. Xitaa soosaarayaasha ugu caansan waa inay dareemaan in tartan cusub uu ka muuqdo suuqa Polish, kaas oo lagu garto labadaba ballaaran iyo faa'iido aad u muhiim ah oo ah qaab saami qiime leh oo wanaagsan.
Sumadda Xiaomi waxay u oggolaaneysaa wax ka badan qalabka guriga ee caqliga leh. Calamada calanka iyo taleefannada casriga ah ee aan la aqoon ee laga sii daayay ururinta Mi, Redmi iyo Pocophone-ka ayaa sannado badan ku caan baxay caannimo. In kasta oo noocyada kaladuwan ee jaban ay yihiin soo jeedin miisaaniyadeed, moodooyinka ugu dambeeyay waxay si deggan ugu tartamayaan noocyo aad loo aqoonsan yahay, xitaa marka laga hadlayo kamaradaha ama waxqabadka. Aaladda moobaylka sidoo kale waa lagama maarmaan si ay ugu shaqeeyaan qalabka guriga ee smart.
Soo-saaraha Shiinaha waa mid aad iyo aad u badan oo lagu sheegay macnaha guud ee badeecadaha kale, sida Mi LED TVs qiimayaasha soo jiidashada leh. Macaamiisha waxay sidoo kale helaan soojeedinno sida laptop 13,3 "laptop, aalada dhagaha-laydhiska ah iyo kuwa ku hadla, gimbals, projectors ama kamaradaha isboortiga.
Erayga ugu muhiimsan ee macnaha guud ee ka wada hadalka raysalwasaaraha Xiaomi ee ra'iisul wasaaraha soo socda ee suuqa Polish waa inuu ahaado erayga "qaab nololeed". Boorsooyinka, boorsooyinka, shandadaha ama muraayadaha indhaha ayaa fura liis dheer oo alaabooyin ah oo waxtar u leh nolosha guriga, iyo weliba safarka ama shaqada. Tusaale ahaan? Waa la beddeli karaa waqti dheer: aaladaha, qalabka wax lagu qoro, shaandhada biyaha, qalajiyaha timaha, mashiinka gacanta lagu haysto, bangiyada korantada, fiilooyinka iyo adapters-ka, xayeysiiska 'selfie', xargaha isboortiga, xirmadaha. Iyo inaad ka fekerto in doorashada suuqa Shiinaha ay tahay mid aad u ballaaran, aadna u ballaaran, maxaa yeelay falsafadda Xiaomi waxay u aragtaa in ballaarin lagu sameeyay qaybo badan oo suuqa ka mid ah.
Taasi waa sida aan u sameysanno goob, ka bilaabmaysa dib u eegista 'Xiaomi Smart Gateway' oo aan ku noqonno arrinta Smart Home Kit. Aaladaha sirdoonka ee waqtiga badbaadiya ama kordhiya amniga waxaa ka mid ah:
qalabka furaha albaabka
iyo qaar kaloo badan. Qaabeynta 'smart sens set set' waxay fureysaa fursado dheeri ah oo lagu xakameynayo guriga caqliga leh iyadoo la adeegsanayo dalabka. Waxaa mudan in lagu daro in sumadda Shiinaha ay siiso xubno iftiin leh, makiinadaha wax lagu nadiifiyo, gawaarida korantada, jikada iyo qalabka musqusha, router iyo kuwo kale oo badan, oo aad ku xiri doonto qayb ahaan, mid si aad ah loo maareeyay oo nidaamka guryaha smartka ah ee suuqa Polish. Igu ogeysii faallada haddii aad xiiseyneyso aaladaha kale ee Xiaomi waxaanan diyaarineynaa dib u eegis kale!